Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးသို့တင်ပို့ တရားစွဲသင့်သည်
Khwe Ma Thar CRIMINAL RACIST Military Implant Mya Saedi Monk…GO TO HELL.
IF President Thein Sein, MOHA Lt General Ko Ko and Sr Gen Min Aung Hlaing fail to arrest their military lap-dog fake monks; Mya Saedi Monk and Wirathu…they all would be held responsible for all the crimes of Swar Arr Shin 969 Ma Ba Thas.
“Sit Khwe မြစေတီဆရာ တော်ကြီးက အတိုင်အတောထူတဲ့ မွတ်ကုလားတွေကို ကျောင်းခေါ်ပြီး ဆုံးမဖို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ်။
မ.ဘ.သ ဟာ အခုအချိန်ထိ တိုက်စစ်မဖွင့်ရသေးဘူး။ ခံစစ်နဲ့ပဲ ကစားနေခဲ့တာ။
ဘယ်လိုလဲ တစ်ပွဲတစ်လမ်း တိုက်စစ်ဖွင့်လိုက်ရမလားလို့ မေးခိုင်းပါတယ်။”
Martch.26th 2015 M-Media Report By-Moe Wai
This entry was posted on March 27, 2015 at 4:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word”
March 27, 2015 at 4:55 am | Reply
၀ီရသူကြောင့် – ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာဖြစ်ရပြီ။ ၀ီရသူကြောင့် – စစ်အစိုးရ လက်သွေးစွန်းပြီး လည်ပင်းကြို့းကွင်းစွပ်နေပြီ။
သမတ ဦးသိန်းစိန်က – ၀ီရသူသည် ဘုရားသားတော်ဟု ကာကွယ်ခဲ့သည်
၀ီရသူကို ထောင်မှ လွှတ်ပေးခဲ့သည်
မွတ်စလင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ရန် တားခဲ့သည်၊ နှောက်ရှက်ခဲ့သည် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးခြင်း မလုပ်ပဲ လွှတ်ပေးထားသည်
၁၀၁၂ ဧပြီလကြားဖြတ်ရွေးကော်ပွဲအပြီး၌ အာဏာရကြံ့ဖွတ် ပါတီ အပြတ်အသတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ကတိပေးထားသော ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်မရှုံးနိုင်ရန် အများ ပြည်သူ၏
လက်နက်မဲ့အရပ်သား များကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းပြစ်မှုများကို ၄င်းတို့ ၏တာဝန်ခံအထက်အရာရှိ အုပ်ချုပ်သူများက တာဝန်ယူရမည်။ အာဏာပိုင် အထက်အရာရှိများဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်မှစ၍ အဆင့်ဆင့်ထိပ်တန်း စစ်တပ်အရာရှိများ သာမာ – အရပ်ဖက်အစိုးရက ၄င်းတို့ ခွင့် ပြုထားသဖြင့် သမတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရတဖွဲ့ လုံးအနေနှင့်တာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ခံအထက်အရာရှိအဆင့်ဆင့်ကို နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေအရ အရေးယူအပြစ် ပေးနိုင်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။ ၄င်းကို COMMAND RESPONSIBILITY ဟုခေါ်၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး၌ ရာပေါင်းများစွာသော ဂျာမာန်နှင့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ၀န်ကြီးများကို ၄င်းတို့ ၏ငယ်သားများ၏စစ်ရာဇ၀တ်များအတွက် အပြစ်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်၍ သေဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
[…] Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word […]